Nalalka dila cayayaanka tamarta cadceeda ayaa si wax ku ool ah u hagaajin kara dhaawaca cayayaanka
Shiinaha, oo leh kheyraad fara badan, ayaa aad ugu adag xakamaynta cayayaanka. Haddii cayayaanka keynta aan la daaweyn waqtigooda, waxay saameyn ku yeelan doontaa deegaanka meelaha kale. Sidaa darteed, waa inaan muhiimad weyn ku saarnaa xakamaynta cayayaanka. Xakamaynta cayayaanka dhaqameed badanaa waxay ku saleysan tahay sunta kiimikada ...
Waxaan ognahay in cabirka aaga caleenta uu xiriir la leeyahay xoojinta sawir qaadista, sidoo kale wuxuu ka tarjumayaa ka faa'iideysiga tamarta qorraxda, isha tamarta aasaasiga ah. Waxaan sidoo kale hagaajin karnaa aagga caleenta si aan u hagaajino waxtarka isticmaalka biyaha ee dhirta cagaaran, laakiin sidoo kale wuxuu leeyahay awood gaar ah oo uu ku nuugo bacriminta, ...
Falanqeeyaha nafaqada ee ciidda degdega ah wuxuu hagaajiyaa qiimaha waxsoosaarka dalagga
Waxaan wada ognahay in koritaanka dalaggu u baahan yahay biyo iyo nafaqooyin. Waxyaabaha ay ka kooban yihiin biyaha iyo nafaqooyinka ku jira carrada ayaa saameeya koritaanka dhirta. Marka nafaqooyinka carrada ay aad u sarreeyaan, waxay sameysmi doontaa xad-dhaafka nafaqooyinka dhirta, taasoo keeneysa kordhinta nafaqooyinka ciidda iyo formatio ...
Mitirka aagga caleenta wuxuu kaydiyaa dhowr nooc oo xogta cabbirka ah
Falanqeeyaha aagga caleenta waa qalab muhiim u ah geeddi-socodka cilmi-baarista jirka. Marka la beero dalagyada casriga ah, go'aaminta aagga caleentu waxay ahayd qayb aad muhiim u ah. Qalabkani waa qalab cilmi baaris oo aad muhiim u ah. Waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu cabbiro oo lagu qoro caleemaha dhirta waa ...
Falanqeeyaha Canopy wuxuu door muhiim ah ka ciyaaraa koritaanka dalagyada, waana muhiimad weyn in la xaqiijiyo abuuritaanka dalagyada macquulka ah. Canopy waa qayb ka mid ah dalagyada laga arko kor ilaa hoose, taas oo u eg koofiyad. Baarayaasha badanaa waxay kahelaan qaar "sir" ku saabsan dhirta. Ta ...
Mitirka chlorophyll wuxuu la socon karaa maadada chlorophyll ee dhirta waqti kasta
Mitirka Chlorophyll waa mid ka mid ah aaladaha ku jira baaritaanka cilmiga jir dhiska. Shaqadeeda ugu weyn waa in la ogaado waxa ku jira chlorophyll ee caleemaha. Qaddarka chlorophyll wuxuu si toos ah u saameeyaa koritaanka dhirta. Tallaabada ugu horreysa ee sawir-qaadis ayaa ah in la nuugo tamarta iftiinka ee loo yaqaan 'chlorophyll' oo ionize laga dhigo ....